I-Apple iqala ukuthengisa amamodeli we-Apple Watch Series 3 aphindwaphindwa | Ngivela kwa-mac
Ngemuva kokuvuselelwa ku-Apple's Official Refurbished Store (US Exclusive), inkampani eseCupertino vele ungeze izinhlobo ezithile ze-Apple Watch Series 3. Kungokokuqala ukuthi inkampani yaseNyakatho Melika ithengise iwashi elihlakaniphile yomkhiqizo njengomkhiqizo obuyiselwe kabusha, ngemuva kwephutha elincane elitholwe efektri.
Isaphulelo siyabonakala, cishe ngama- $ 50, okusho ukuthi isephulelo cishe esingu-15%. Kumele kuqashelwe ukuthi, okwamanje, ayikho imodeli enikeziwe enikeza ithuba lokuxhuma kwe-LTE.
Amamodeli akhona njengamanje alandelayo:
38mm Gold Apple Buka nge Pink Sport band: iza ngentengo engu- $ 279; Intengo yakudala engu- $ 329.
I-42mm Apple Watch Space Gray Aluminium neBlack Sport Band: ngentengo engu- $ 309; Intengo yakudala $ 359.
I-Apple Watch Series 3 yethulwe ngoSepthemba 2017, kanye nezinhlobo ezintsha ze-iPhone, futhi iyimodeli yokuqala yokunikeza inketho nge-LTE eyakhelwe ngaphakathi. Okwamanje, le modeli ayikathengiswa njengomkhiqizo owenziwe kabusha, kepha inkampani yezobuchwepheshe ivuselela amayunithi atholakalayo kanye namamodeli kaningi, ngakho-ke uma unesifiso sokuthola omunye wale mikhiqizo, kungakuhle ukuthi unake ukunyakaza okungenzeka.
Lezi zinhlobo zamathuba emakethe ziyithuba elihle lokuthi thola imikhiqizo yenkanyezi yenkampani ngentengo ephansi lapho ikhishwa emakethe. Kulokhu, ukonga kuzo zombili izinhlobo kuzoba cishe ngama- $ 50.
Njengoba sazi, yonke imikhiqizo eyenziwe kabusha, dlula ngenqubo eqinile yekhwalithi nokulawula ngaphambili okuzonikelwa emphakathini jikelele. Njenganoma yimuphi omunye umkhiqizo we-Apple, zonke lezi zinhlobo ziza newaranti yonyaka owodwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » I-Apple iqala ukuthengisa izinhlobo ezenziwe kabusha ze-Apple Watch Series 3